Teny lakile, Frequency atiny ary SEO
Ny maha-zava-dehibe ny atiny vaovao ho an'ny SEO
Alakamisy 10, 2011 Alakamisy, Jolay 18, 2013 Douglas Karr
Efa ela aho no nilaza tamin'ny olona fa ny fomba fiteny taloha momba ny marketing dia mihatra amin'ny atiny ihany koa. Ny fitadiavana, ny fahita matetika ary ny lanjan'ireo atiny no fanalahidy. Izany no antony fitorahana bilaogy manan-danja tokoa amin'ny tetikady marketing marketing… mamela anao hanoratra matetika. Ny tabilao etsy ambany dia avy amin'ny iray amin'ireo mpanjifanay. Nanatsara ny tranon'izy ireo izahay, ary niaraka tamin'ny fampiroboroboana ivelan'ny tranonkala, dia nitsambikina tamin'ny laharana fifaninanana tena mahomby izy ireo.
Na izany aza, rehefa afaka volana maromaro dia nanjary sarotra ny nahazoana atiny vaovao amin'ny teny fanalahidy isan-karazany. Be loatra ny ekipa nanoratra ny atiny ka nanakarama mpanoratra atiny ho azy ireo izahay. Raha nifantoka tamin'ny vokatra sy ny vaovao ny orinasa dia nifantoka tamin'ny toro-hevitra ankapobeny sy ny fomba tsara indrindra ho an'ny indostria ny mpanoratra. Nanolotra lohahevitra maromaro fotsiny izahay miaraka amin'ny teny lakile izay tsy nahazo hery, ary voilà!
Ny tabilao dia avy Semrush, izay misambotra ireo sehatra ambony indrindra amin'ny teny lakile 60 tapitrisa. Tsy ity client ity ihany no nampitombo ny isan'ireo teny lakile nilazany filaharana ho an'ny, nanatsara ny laharana ankapobeny ihany koa izy ireo. Aza avela ho lany andro amin'ny tranokalanao ny tranokalanao.
Ny fanomezana atiny vao haingana sy matetika ary sarobidy dia tsy vitan'ny fitsidihana fotsiny fa hanampy amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana anao!
Tags: Content Marketingteny fanalahidyfikarohana OptimizationSEO
Google mifanohitra amin'ny Facebook amin'ny tsiambaratelo
Fandraisana an-tanana ny geosocial sy ny toerana misy azy
10 Nov 2011 tamin'ny 5:51 PM
Doug, ok, izany ve ny atiny izay nampisondrotra manokana ny metrikany, na ny fihetsika nataon'ny olona rehefa nahita ny atiny? Niverina tamin'ny zava-misy aho tamin'ny alàlan'ny lahatsoratr'i "Number Matter" (https://martech.zone/numbers-matter/ ). 😉 John
10 Nov 2011 tamin'ny 5:54 PM
Amin'ity tranga ity dia tsy nanana atiny tamin'ny teny fanalahidy hafa tokony ho nalahany izy ireo. Raha fintinina, tsy afaka laharam-pahamehana amin'ny fitambaran'ny teny lakile ianao raha tsy manana pejy manonona azy! 🙂